Laba siyaabood oo aad ku ilaalin karto guurkaaga - Aayaha
Aayaha editorFebruary 14, 2019
Jacaylku waa wax qurux badan, shaki kuma jiro, balse ma jirto wax kasii qurux badan markaad xiriir la leedahay qofaad si dhab ah u jeceshahay. Jacaylku waa mid isku keena laba ruux balse haddii aysan aheyn laba ruux oo garasho badan oo diyaar u ah inay ku dadaalaan in xiriirka guuleysto waxay u badantahay in xiriirkaas burburo.
Waxaan idiin soo gudbineynaa laba siyaabood oo aad ku ilaalin karto guurkaaga/xiirkaaga.
Noqo daacad oo mar walba fur furan
Mid kamid ah tiirarka ugu waaweyn uguna xoogan ee uu xiriirka lamaanaha ku dhisnaa karo ayaa ah daacadda.
Kartida iyo inaad daacad u noqoto lamaantaada waa wax ay dad badan ka maqantahay. Ma sheegan kartid inaad qof jecesahay adigoo siraha ka qarinaya taas waxay meesha ka saareysaa sheegashadaada.
Ma jirto sabab aad been ku sheegto waa mid aad u xun, xittaa haddii aad sameysay qalad, inaad u sheegto lamaantaada ma keeneyso isku dhac ama furiin. Haddii aad inta u sheegto ay furiin ama wax lamid ah dalbato ogoow inaysan markii horeba ku jecleen. Balse haddii aad ka qariso oo ay banaanka ka helaan sirtaas waa goortaas marka uu dhib imaanayo sababtoo ah waxay dareemeysa ama uu dareemayaa inaad qiyaantay oo aadan qiimeyn.
Guur badan ayaa arrimaha noocan oo kale oo la iska ilaali karo u burburay. Mar kasta daacad noqo oo runta u sheeg lamaankaaga/lamaantaada.
Noqo mid wax ilooba oo sidoo cafis leh
Waa inaad noqotaa qof nafta u huri kara qofka uu xiriirka la leeyahay…waa inaad sidoo kale ogaataa in lamaankaaga/lamaantaada aysan meel walbo ka dhameystiren ama aysan ahayn kuwo aanan qalad sameyneyn.
Wax badan ayay kaa careysiineysaa oo neerfahaaga ay kicineysaa balse waxaa lagaa rabaa inaad ogaato inay tahay bini aadam adigoo kale ah.
Marka ay sameyso qaladaad oo ay kaa raali geliso dulqaad u muuji, cafi oo horey uga soco.
Sida Qalbiga Loogu Dajiyo Xaaskaaga Marka Ay Murugeysantahay
Waxyaabaha Qofna Uusan Kuu Sheegin Ee Ku Saabsan Kulanka Sariirta Dhalmada Kadib